संसारकै सुन्दर अभिनेत्री जो शारीरिक बनोटकै कारण सबैको ध्यान खिच्छिन् (फोटो फिचर) « गोर्खाली खबर डटकम
विश्वमै सुन्दर अभिनेत्री एरियल विन्टर हलिउडमामात्र होइन विश्वभर चर्चामा छिन्। शारीरिक बनोटकै कै कारण उनी विश्वभर चर्चित बनेकी हुन्। हालै सार्वजनिक उनका तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन्।
सुन्दरताकी खानी तथा मिठो आवाजकी धनी विन्टरका तस्विरले विश्वभर हंगामा मच्चाएको छ। २० बर्षीय अमेरिकी अभिनेत्री सुन्दरताले मात्र विश्वभर चर्चामा छैनन्। उनको आवाज पनि त्यतिकै मिठो छ। सुन्दर अभिनय कलाभएकी एरियलका हरेक फिल्महरु हिट हुने गरेका छन्।
उनको अभिनय रहेका प्रायः चलचित्रले दर्शकको मन जित्न सफल भएका छन्। चलचित्रबाट सफलता हात पारेपछि उनी निकै व्यस्त नायिका बनेकी छिन्। तर पछिल्लो समय उनले आफूलाई मन पर्ने फिल्ममा मात्र अभिनय गर्न थालेकी छिन्।
उनी अहिले विश्व प्रसिद्ध भएपनि उनले यो जीवन पाउनको लागि धेरै बाधा अड्चन पार गरेकि छन्। उनले सबैभन्दा बढी कठिनाई स्त न शल्यक्रियाका क्रममा बेहोर्नुपर्यो। कलिली केटी हुनु र धेरै तौलको छाती रहनु दुखदायी हुन्छ। शारिरीक रूपमा तपाई पनि पीडित बन्नुहुन्छ’, उनले भनिन्।
तपाईलाई चाहिने लुगा भेट्नुहुन्न, मैले नुहाउँदा लगाउने कपडा भेटेकी थिइन्। म से-क्सी बन्न चहान्थे तर सकिन। मेरा उमेरका साथीजस्तै कपडा मैले भेटिन्। एरियल शरिरको शल्यक्रिया खासगरी स्त’नकै पनि गर्नका लागि त्यति खुसी थिइनन् । तर गर्नैपर्ने अवस्था आयो। उनले आफ्नो भद्धा स्त नको २०१५ मा शल्यक्रिया गराएकी थिइन्।
हेरौ उनका केही तस्वीरहरु:
गाईले पत्ता लगाएको गुप्तेश्वर महादेव गुफा, जहाँ जे मागेपनि पूरा हुन्छ ।
नयाँ काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुराहरुलाई ध्या’न दिनुहोस् !!